Cod - ethandwa kakhulu ukupheka inhlanzi. Isetshenziselwa izitsha eziningi ezahlukene, eziqala elula efana cod in Batter nesiphetho eziyinkimbinkimbi njengokucindezeleka gefilte izinhlanzi.
Cod - zolwandle, nge inyama emhlophe, okumangalisayo namanzi futhi esihlwabusayo. Kunezinhlobo eziningana ke: White Sea, ePacific, Atlantic noma iqhwa (indawo). umehluko Okuningi phakathi kwabo, ngaphandle ubukhulu, akukho. Ngesikhathi esifanayo zonke izinhlobo cod aqukethe eningi amavithamini. Kuyinto ecebile amaprotheni, kanye phosphorus, i-sodium, isibabule, i-potassium, i-magnesium, okuwusizo for umsebenzi ubuchopho, futhi hematopoiesis. Ngaphezu kwalokho, i-cod kalula kugaywe futhi normalizes pheshana emathunjini.
Cod in Batter ulungiselela bamane futhi masinyane, leresiphi kuyodingeka ngisho nalabo abangenayo nesikhathi esimnandi Culinary angayithandi.
Yini okudingeka siyenze ukuze uthole ukudla okumnandi? cod okumnandi in Batter bekungaba kuhle kanjani uma isinyathelo esilandelayo izithako ukupheka: uhhafu ikhilogremu cod umucu, iqanda elilodwa, ambalwa wezipuni zamafutha yemifino, lukalamula, ababili wezipuni kafulawa, pepper kanye nosawoti.
Ekuqaleni esikalini cod ahlanzekile, wami ngokucophelela, uthathe tincetu alinganayo umucu. Ukuze kungabikho muntu ophathwa enkingeni ngesikhathi sakusihlwa, kubalulekile ukukhetha ngokucophelela kusukela inyama namathambo. Khona-ke afafazwe ngosawoti kanye umpe lukalamula. Ake izinhlanzi kuze belala, futhi sithatha phezu ukukhiqizwa Batter.
Lungiselela Batter izinhlanzi nje. Hlukanisa Iqanda endishini, enezele futhi ambalwa Eluma ka usawoti kanye emnyama. Okokuqala kufanele ishaye amaqanda nge izinongo, bese amanye kancane ufulawa, ugovuze inhlama. Ukungaguquguquki ke kumele ibukeke Batter Pancake. Khona-ke udinga agcobhoze nocezu cod ngamunye Batter nhlangothi zombili. Kulokhu, qiniseka ukuthi ucezu ngalunye is ngokulinganayo camera Batter, incike ifomu jikelele ukudla.
Isinyathelo esilandelayo. Thatha epanini ukuthosa, kancane gcoba futhi shisisa amafutha zemifino. Khona-ke izingcezu ukulungele zezinhlanzi in Batter embula it. Zombili izinhlangothi kudingeka Fry phezu ukushisa low, embozwe imizuzu engu-12 kuya ku-15. Khona-ke inhlanzi yakho uthole namanzi kakhulu futhi iyoshisa. Phakathi neminyaka yokuqala imizuzu emihlanu, susa isivalo basikisela ukuthi umswakama ngokweqile uye ayahwamuka. Fry kuze kube nsundu enhle segolide. Khona-ke udinga ukususa izinhlanzi on a napkin. Ama-cod ase kahle eliphekwe Batter, kubukeka amahle hhayi kuphela, kodwa futhi unalo ukunambitheka omuhle.
Uma uthanda izinhlanzi sauce, iresiphi okuyinto ngezansi kuyoba mnandi kuwe kwalowo odlule.
Cod e cream sauce ephekwe eziko.
Thatha: 500 g ama-cod, amakhowe '60, amazambane abilisiwe 3 izicucu, anyanisi '80, dill uvumelanise. Impuphu '30, '55 bhotela elicibilikile, ibhotela '30, amaqanda 2, ushizi 50 g, 200 ukhilimu omuncu, usawoti, emhlabathini pepper.
Ukuze cod e ukhilimu bathandile hhayi kuphela ikati lakho, kodwa wonke umndeni, asilandele ngokucophelela izincomo zethu. inhlanzi Kukhanseliwe, njengoba kuboniswe ngenhla, khetha ithambo. cod nezibopho ke wahlukanise izingcezu, inkathi ngosawoti, umqulu nofulawa wombila gazinga e bhotela kuze kuze kube yilapho yonke ucezu Uthola umbala legolide. Anyanisi kanye amakhowe futhi gazinga fake Chop e okufanayo ghee, kodwa eceleni. Amaqanda, amazambane abilisiwe kusengaphambili. Lapho selehlile, kufanele uthathe yizicucu amancane. Okwamanje, lungiselela sauce ukhilimu. Ukuze lokhu ukhilimu kuyadingeka ukuba alulaze amanzi abandayo abilisiwe esimweni liquid.
Ezansi pan ukuthosa uthele ukhilimu buhlanjululwe, Wabulala izinhlanzi okuthosiwe, emhlabeni tincetu amazambane abilisiwe. Amakhowe futhi anyanisi ukubeka ngqo kwi-cod, nendawo ezayo tincetu amaqanda, usawoti kanye pepper, sihlanganise lonke sauce ukhilimu. Ufafaze ushizi vukuza, Ukukhemezela ne ibhotela kancane encibilikisiwe ubhake imizuzu engu-30 degrees 200. Lapho sikhonza, ukuhlobisa nge dill.
Centre exchange ubuchwepheshe: ukubuyekezwa, ukuqeqeshwa, umsebenzi